POOLISIIN FEDERAALAA FI POOLISIIN OROMIYAA WAL HUDHUUF MORMA WAL QABDEETTI JEDHAMA – Welcome to bilisummaa
POOLISIIN FEDERAALAA FI POOLISIIN OROMIYAA WAL HUDHUUF MORMA WAL QABDEETTI JEDHAMA
POOLISIIN FEDERAALAA FI POOLISIIN OROMIYAA WAL HUDHUUF MORMA WAL QABDEETTI JEDHAMA.POOLISIIN FEDERAALAA BARATTOOTA OROMOO BAKKAYYUU AJJEESAAFI HIDHAA JIRU.
Akkuma Magaalaa Amboo keessatti tahaa tureefi jirutti guyyaa kaleessaa yuunivarsiitii Haroomayaadha koottaa wal gahii bahaa,gaaffilee keessaniif deebii finneerra qaama dhimmi ilaallaturraa jechuun erga walitti qabanii booda ilmaan Oromoo 150 tahan gara mana hidhaa waajjira poolisii Haroomayaa fidanii sinirraa hin fuunu jennaan gara hin beekkamnetti geessuun dhagahameera.
POOLISOONNI OROMIYAA YEROO POOLISOONNI FEDERAALAA IJOOLLEE REEBAN ITTISAAFI TUMSA GOCHAA JIRAN.
Yuunivarsiitii Adaamaafi magaalaa Adaamarraayis gara namoota 200 ol tahantu hidhameera.
Haa tahu malee achittis poolisoonni Oromiyaa barattoota Oromoo akka hin tumamneefi hin hidhamne wal dura dhaabbachuu isaanitu gabaaafama.
maqaa hidhamtoota kanneenii akka gabaasni nu gaheen ilmaan Oromoof qaamota mirga namoomaaf dhaabbatan hundaaf ni gabaasna.
“Wal-basaasuun hafee diina Oromummaa callaadhaan namatti dhufe irratti xiyyeefachuun baay’ee waan gameessa. Nama morman fakkaatanii ijoollee keessa dhaabachuun warri guyyaa iyyaa oolanii galgala ammoo dabarsanii ormatti ijoollee kennan of-eeggadhaa. Yaa namicha hojjetaa poolisii federaalaa turtee har’a garuu Yunivarsiitii Adaamaatti barnoota irra jirtuu gochaa akkanaa irraa of-qusadhu si gaagaati. Gaaffiin barattootaa, gaafii haqaati.”
Oromoo wal malee nuti fira hin qabnuuti waliif haa birmannu.Sochiin amma kahe kuni fiixa bahuu dhabee duubatti deebinaan gaaffi seenaa jalatti na gatee darbuu isaa hin dagatinaa.
Previous Godina Lixa Shawaa Ona Shananaa keessatti FDG fi falmii mirga abbaa biyyummaa har’a geggeeffamaa oole irratti ilmaan Oromoo 3 wareegaman.
Next Yaa Oromoo gahee kee bahi, uumata guddaa Oromoo waami, guyyaan boruu guyya inijifannooti.